Inona ny tohin'ny fizahantany Vanilla Islands? Tale jeneraly amin'ny fitsidihana miasa any Seychelles avy any Reunion
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Inona ny tohin'ny fizahantany Vanilla Islands? Tale jeneraly amin'ny fitsidihana miasa any Seychelles avy any Reunion
Novambra 18, 2018
Tamin'ny herinandro lasa teo, Pascal Viroleau, ny CEO an'ny Nosy Indian Vanilla Islands, dia tany Seychelles mba hiady hevitra amin'ny minisitry ny nosy tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany, Andriamatoa Didier Dogley sy ny ekipany. Ny fivoriana dia natao indrindra hiadian-kevitra momba ny Fivondronambem-paritra izay tokony hahita ny minisitry ny Seychelles handray ny toerany amin'ny volana desambra.
Ny fihodinan'ny filoham-pirenena ho an'ny Nosy Indianina Vanilla Vanilla dia voarakitra ao anaty antontan-taratasy nametraka ny fikambanana ary miantoka ny fananan'ny fanjakana sy ny isam-pirenena mpikambana ny fahafahany mitarika ny fizahantany fizahan-tany. Ny Nosy Vanilla dia nahavita fahombiazana miavaka hatramin'ny niforonany. Androany ny fahombiazan'ny antsoina hoe Cruise fizahan-tany ho an'ny Ranomasimbe Indianina dia miavaka amin'ny fitomboan'ny fihodinana, sy ny fahatongavan'ireo orinasa vaovao hivezivezy ao amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Ny fanohanana ny fikambanana avy amin'ny Nosy Réunion dia nanampy tamin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny Vondrom-paritra. Ny filoha Didier Robert, ny filohan'ny filankevi-paritry ny Réunion dia mpanohana mafana ny fiaraha-miasa fatratra ka nanokatra ny birao fivarotana Réunion any amin'ny ankamaroan'ny nosy ranomasimbe indianina aza izy mba hamporisihana ny varotra sy ny fitsidihana bebe kokoa eo amin'ilay rahavavy nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Mauritius Festival International Kreol 2018 natomboka
Mpiara-miasa amin'ny hotely ofisialin'ny ATM: Vondron'olona mandray vahiny Emaar